Hlola i-Las Palmas, iziqhingi zaseCanary - World Tourism Portal
Hlola i-Las Palmas, iziqhingi zaseCanary
Yini okufanele uyenze eLas Palmas, eziqhingini zaseCanary
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeLas Palmas
Bukela ividiyo ngeLas Palmas
La Palma, ci-ommonly eyaziwa ngokuthi yiLas Palmas, ingelinye lamadolobha amakhulu kulo Spain, futhi iyidolobha elikhulu kunawo wonke kulo eCanary Islands okuyingxenye ebalulekile yeSpain. Kuseduze Morocco, ICape Verde kanye neziqhingi zase-Azores naseMadeira, zombili zingamaPhuthukezi. Isidlaliso sesiqhingi sithi "La Isla Bonita" (isiqhingi esihle).
Hlola i-Las Palmas ejabulela isimo sezulu esingaphansi kwendawo yonke, enamazinga okushisa afudumele unyaka wonke.
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eLas Palmas, eziqhingini zaseCanary.
I-Playa de Las Canteras- Cishe i-4 yamakhilomitha ubude, leli bhishi liwuphawu lomuzi kanye nezakhamizi zalo. Kubhekwa njengolunye lwamabhishi asedolobheni ahamba phambili emhlabeni, kuphephile impela ngenxa yomgwaqo ovinjelwe futhi kuningi ongakwenza ekuphakamiseni. Kungaba yindawo enhle yokuhambahamba kusihlwa ngenxa yokushona kwelanga kanye namagagasi aphansi, futhi ngosuku oluhle ungabona ngisho namalambu Tenerife.
IParque Santa Catalina- Ipaki nehabhu lezokuthutha endaweni ethekwini. Njalo ngonyaka cishe ngoFebhuwari imigubho yeCarnival ibanjwa lapha.
I-Triana- Enye yezifunda ezindala eLas Palmas, futhi manje isikhungo sezentengiselwano sedolobha. E-2013 uthole umklomelo womgwaqo omuhle kakhulu wezentengiso waseSpain. ISonto lokuqala lenyanga zonke izitolo ziyavulwa futhi kukhona amajikijolo nokunye ukuzijabulisa. Okhilimu beqhwa be-Guirlache bayashayisana nabendawo. Cishe wonke amabhasi adlula eTrana, ungangena eTeatro noma eSan Telmo Bus Station.
I-Vegueta- Ingqopha-mlando yedolobha. Indawo enhle kakhulu yedolobha yeziphuzo nezindawo zokudlela. Kuba kuhle impela ngoLwesine ngenxa ye-'Tapas kusihlwa '. ICalle Pelota neCalle Mendizábal kulapho ithola khona kakhulu, nendawo ezungeze umtapo wezincwadi kawonkwonke.
I-Catedral de Santa Ana- Ihlanganisa amakhulukhulu eminyaka omlando, isonto lesithathu liyabonakala cishe kunoma iyiphi indawo enkabeni yedolobha.
ICasa de Colón Museum- Lesi sakhiwo esidala, esingemva kwesonto lesonto, sasiyindlu yombusi walesi siqhingi, futhi sithi kwakuyindlu yesikhashana kaChristopher Columbus ngaphambi kokuya emazweni aseMelika. Manje inomnyuziyamu mayelana nomhloli, ukunqotshwa kweziqhingi zaseCanary yiCrown of Castille, kanye ne-pre-columbine America. Kuvulwa nsuku zonke ukusuka ku-10: 00 kuya ku-18: 00 ngaphandle kwamaSonto nangamaholide asebhange lapho kuvalwa e-15: I-00 Impelasonto yokuqala yenyanga mahhala.
ICasa de Pérez Galdós Museum.Lapho kuyindlu lapho umbhali odumile waseSpain azalwa futhi ehlala khona waze waba neminyaka eyi-19. Ibigcinwe njengoba beyihlala njengombukiso wobumbano lwasendlini lwaseCanada ukusuka kwi19th Century. Impelasonto yokuqala yenyanga mahhala. NgoLwesibili kuya kuLwesihlanu kuvuliwe kusuka ku-10: 00 kuya ku-16: 00, ngezimpelasonto ukusuka ku-10: 00 kuya ku-14: 00 nangamaholide asebhange asuka ku-10: 00 kuya ku-16: 00. Kuvalwa ngoMsombuluko.
Isikhungo Somnyuziyamu Omdala Wezesayensi Nobuchwepheshe- Imibukiso eminingi inolwazi ngesiSpanish nesiNgisi. Uma uku, ungasebenzisa futhi amakhompyutha e-inthanethi lapho, ngakho-ke imali yokungena inhle kakhulu. Kuvulwa ngoLwesibili kuze kube yiSonto kusuka ku-10am. kuya ku-8pm.
Muelle Deportivo. Iba neziphuzo noma isidlo sakusihlwa ubukele ukushona kwelanga phakathi kwama-yachts. Ngezimpelasonto le yindawo ethandwa iqembu. Kuhle futhi ukuvakashela ngoLwesine lapho kukhona izaphulelo kanye nama-tapas.
U-Alfredo Kraus Auditorium- Ikhonsathi kanye nomculo we-philharmonic okwenziwe nge-classical philharmonic kanye nesakhiwo esikufanele ukuvakasha uwedwa.
UMuzio Canario. Itholakala esifundeni esingumlando saseVegueta. Kusungulwe i-1879, kungukubambisene naye emhlabeni jikelele woMkhandlu Wokucwaninga Ngesayensi (i-CSIC). Ineqoqo elibalulekile lezinto zaseCanary zemivubukulo, eziboniswa emahholo e-16. Futhi ifakwe umtapo wezincwadi wamavolumu angaphezu kwe-60,000, iningi lawo elibhekene nezihloko zeCanary Islands. Ingobo yomlando yayo ihlanganisa isikhathi kusuka ku-1785 kuze kube namuhla.
I-Atlantic Center yobuciko besimanje (CAAM)- Kuvulwe ku-1989, kungenye yezinkomba ezibaluleke kakhulu empilweni yamasiko nobuciko eCanary Islands, futhi unesibopho sokusabalalisa ubuciko obenziwe eziqhingini ziye emhlabeni wonke, ikakhulukazi e-Afrika, eMelika naseYurophu. Inemibukiso engapheli neyesikhashana esukela emlandweni we-avant-garde kuya ezimweni zakamuva. Itholakala Calle Los Balcones de Vegueta, futhi igcina façade yasekuqaleni yekhulu le-18th.
U-Barrio San José (Umlando Wendawo KaSan José). IBarrio San Jose, iLas Palmas De Gran Canaria ingelinye lamakhaya amadala okuhlala eLas Palma. I-San José njengomakhelwane wasemadolobheni yangaphambi kokuqala kwayo ikhatholika wayo - iSan José Cathedral - yasungulwa ngo-1458 wesifunda. ISan Jose ibingaphandle kwamadolobha amakhulu ezinqaba zezindonga futhi bekungaba ngumakhelwane lapho kuhlala khona abasebenzi bendawo abangenazo izicucu ezanele zokuvikela ukuvikeleka kwezindonga zedolobha. Ngasemaphethelweni aphezulu omakhelwane agudle umugqa wegquma njengamanje kuyizinsalela ezashiywe zikhathi zamaFranco Military Bunkers neNqaba yaseSan Juan eyaqala ukwakhiwa Spain ngemuva kokulahleka kweCuba kubantu baseMelika ngesikhathi seSpain - War War American circa 1898. Izindawo zokuhlala zaseSan Jose njengamanje zinobumba obumibalabala obumibalabala nezindlu ezibunjiwe ezakhiwe ngemigwaqo ehlukahlukene ekhuphuka naphansi emagqumeni eya emigwaqweni eminingi yokuhamba kanye namapaki amancane afihliwe njengama-Oasis Palms aseduze komakhelwane abangamaNgisi Cemetery. Enye indawo eyaziwa ngokuthi yiCasa Amarilla (Yelow House) yisikhungo somphakathi esikhulu ngemuva kwesonto futhi mhlawumbe nemigoqo yasendaweni. ICasa Amarilla iyisizinda semicimbi yemiphakathi nemicimbi yendawo, kazwelonke neye-EU yezindawo zokuhlala. ICasa Amarila ibambelela kumgwaqo webhola lendawo kanye nama-vistas asuka kumakhakhasi kanye nasePaseo San Jose - umgwaqo omkhulu wenkonzo - ngokubukwa kolwandle e-Eastern Border nasezintabeni, ezindlini naseBunkers eWestern Border yakhe. Abantu bendawo bayamema futhi uma injongo yakho ingxoxo nomoya omuhle unenala.
I-Las Arenas. Njengoba isendaweni ekhethekile, eduze kwe-Alfredo Kraus kanye nolwandle oludumile lwe-Las Canteras, ingesinye sezikhungo zokuqala zokuthenga kulesi siqhingi nezidume kakhulu. Isikhungo sokuthenga sinezitolo eziningi zemfashini kanye nohlu olukhulu lwezindawo zokudlela ezinokubukwa okumangalisa kolwandle.
Njengedolobha lolwandle, iLas Palmas idume kakhulu emisebenzini yase-Oceanside. Bamba igagasi, ubambe i-snorkel yakho, noma vele ungene elangeni (ngemuva kokusebenzisa i-sunscreen, kunjalo!). Noma uma uzizwa ufuna ukuhlola i-terra firma, yenza njengoba kwenza abantu bendawo bese usebenzisa ibhasi lezokuvakasha lomphakathi, elaziwa nge-guiriguagua.
Kunemicimbi embalwa ongayibona
Cishe lidume njengalesiqhingi esingumakhelwane saseTenerife, sehlukile futhi mhlawumbe singcono kakhulu. Akungabazeki ukuthi kuyamangaza impela.
I-WOMAD Music Festival - Igujwa endaweni yaseSanta Catalina Park, lo mkhosi uletha izinkulungwane zababukeli minyaka yonke ngomculo wekhwalithi mahhala.
URomería de Vegueta - Umkhosi wama Katolika ugujwa endaweni yase Vegueta yedolobha.
Lesi siqhingi sinenani elincane labantu abangaphansi kwezinkulungwane eziyikhulu. Inesikhumulo esikhulu esisodwa (iSanta Cruz de la Palma), ichweba lesibili elincane (iTazacorte) kanye nesikhumulo sezindiza emhlabeni jikelele (SPC).
Kukhona ukuxhumana okujwayelekile kwesikebhe kuya Tenerife nezikebhe ezihamba kuphela eziya kwezinye iziqhingi, ziya eCadiz ezweni elingumhlaba Spain kanye nogu lwase-Afrika.
Ngokufanelekile inani labantu ikakhulu yiSpanic (empeleni ingxube yeSpanish, iBerber nePutukezi), nenani elincane labokufika baseYurophu nenani elincane kakhulu labokufika base-Afrika.
Lesi siqhingi sikhipha ubhanana, i-rum, i-gofio kanye nogwayi, futhi sisingatha emkhakheni omkhulu wokuhlola izinkanyezi emhlabeni.
Imoto yokuqasha iyindlela engcono yokuthola izindawo ezikude zehlane. Imigwaqo igcinwe kahle futhi imakwe ngokulawulwa kwethrafikhi. Ukushintshwa okubukhali kuphela kanye nama-verticals emigwaqweni eseceleni angafaka inselelo kwabanye abashayeli.
Kunamadolobhana ambalwa amahle, kodwa okuhehayo okuyinhloko emaphandleni. Izindawo ezinentaba-mlilo ebabazekayo ezifika ngaphezulu kwamafu ezinotshani obumnyama ezigodini zenza izintaba ezithile ezinhle.
Iphuzu eliphakeme kakhulu esiqhingini, i-El Roque de los Muchachos (2426m), litholakala kalula ngezimoto iningi lonyaka futhi imibono evela lapho iyamangaza futhi inikezela ngesingeniso esihle kubuciko besiqhingi (qaphela ukuthi ukufinyelela kuvinjelwe e- ebusuku njengoba lokhu kuyindawo yokubhekwa kwezinkanyezi enkulu yamazwe omhlaba - njalo funda izibonakaliso - futhi uqaphele ukuthi imigwaqo nezindlela zingavalwa izinsuku ezimbalwa ebusika ngenxa yeqhwa). Kukhona inethiwekhi ebanzi kakhulu yokuhamba ngomgwaqo esiqeshini sonke lesi siqhingi esinezimpawu ezinhle futhi amamephu okuhamba ayatholakala ehhovisi lezokuvakasha eSanta Cruz.
Ngasogwini olusenyakatho-mpumalanga, uzothola inqwaba yezilimo ezesabekayo (ikakhulukazi ubhanana) ohlanganiswe namadolobhana amancane nemizana.
Maphakathi nesiqhingi kuneCaldera de Taburiente, umgodi omkhulu wokuguguleka ongomunye wemikhulu emhlabeni. Izinkomba eziqondisiwe eziya esifundeni ziyatholakala. Ngezinyanga zasebusika ukuhamba ngezinyawo embhedeni womfula esifundeni kungaba yingozi ngempela ngoba imvula ingadala izikhukhula.
Inhloko-dolobha yesiqhingi, Santa Cruz, inezakhiwo eziningi ezindala ezilondolozwe kahle nemigwaqo ye-cobblestone. E-Alven Avenida Maritima ungabona amabhaloni amadala aseCanada enziwe ngophayini weCanary.
Izindawo ezinhle kakhulu zokuthenga yi-Triana, umgwaqo ohamba ngezinyawo ozungezwe izakhiwo zomlando ze-Art Nouveau, kanye neMesa y López Street, enezitolo ezinkulu ezimbili zomnyango kanye nezinye izitolo eziningi. Ungavakashela futhi esinye sezikhungo eziningi zezitolo. Isikhungo sokuthenga saseLas Arenas, ngasentshonalanga Las Lasantant Beach (eduze neHholo Lomculo) likhulu kunawo wonke, uzothola wonke amaketanga amakhulu lapha nezindawo zokudlela eziningi (izivakashi zithola ikhadi lesaphulelo elinesaphulelo kuze kufike ku-50% kuvaliwe).
Kukhona i-cinema encane yase-Europe (Multicines Monopol) e-Triana enamafilimu amaningi ngohlobo lwangempela nama-subtitles, uma ufuna ukuhlwa kusihlwa. Ngemuva kwefilimu hlola imigoqo ethambile ophahleni lwophahla.
Kwezinto zokudla, iHiperdino iyichungechunge lendawo yezitolo ezinkulu ezinohlu oluhle lwemikhiqizo nezintengo ezisethiwe. Ezinye zalezi zitolo zibuye zikhethe kahle i-wayini. Ukuthola inhloko yesipiliyoni sokuyothenga esitolo seMnyango we-El Corte Inglés eMesa y López Street (Abavakashi bathola isaphulelo se-10% kuyo yonke imikhiqizo ekhombisa i-ID yakho) noma imigwaqo emincane ezungeze i-Triana, lapho ungathola khona izindawo zokudlela ezinhle nezindawo zokudlela ezinhle.
Thenga i-rum yendawo: Ama-Arehucas (aziwa kakhulu phakathi kwendawo) i-Artemi noma i-Armiche (bese uhlola i-Honey Rum “ron miel” yendawo).
Umhubhe Canal ekuhambeni kweLos Tilos
Ukuhamba eLos Tilos - uma kungenzeka uthole amatekisi amane esinamasondo ukuze uqale ukuhamba. Ngemuva kwalokho hamba uzungeze umsele (lokho okwenziwe kuMadeira okwakubizwa ngokuthi i-levada) kulandela ukuvela komgwaqo obondwe ngesihlahla oshibhile ohamba ngemigudu ye-13 (ukugoba ukugwema ukushaya ikhanda lakho). Inombolo yomhubhe 12 imanzi ngaphakathi. Bese wehle ehlathini le-laurisilva (isisekelo esididayo kodwa esimangazayo se-1000m). Futhi ungaphuthelwa ukubheka - i-dyke yentaba-mlilo engaba amamitha amabili ububanzi nama-sheer amaconsi kuzinhlangothi zombili, kepha ivikelwe yi-handrails ngokubukwa okumangalisa ngokuphelele kwe-360 degree.
I-Ruta Del Volcanoes. I-Ruta del los Volcanes - ingxenye yomgwaqo we-GR 131 webanga elide - kanye nobude be-Cumbre Vieja, indlela enokubukwa okuhle okukuyo yonke indawo, kanye neziqhumane zezintaba-mlilo ngobude bonke. Futhi, ukuhamba okunzima ngosuku olushisayo, futhi uthuli lubhajwe ngokuhamba kwabahamba nabo 'lufika yonke indawo, kepha ukuhamba ngendlela engalibaleki.
Okokwenele futhi nomdlandla, kukhona indlela yokuhamba ye-GR130 ehamba nxazonke eLa Palma ikakhulukazi ezindleleni zommbongolo onomlando. Kuthatha okungenani izinsuku eziyisikhombisa ezidinga ukuhamba cishe amahora ayisishiyagalombili wokuhamba kanzima nsuku zonke. Uma kungenzeka thatha okungenani izinsuku ezimbalwa ezingeziwe. Kungenziwa kwisabelomali ngokusebenzisa izimpesheni lapho kungenzeka. Isimo esishintsha njalo siyamangaza, uzohlangana nabantu bendawo ethokozisayo endleleni futhi kuyinto ongayikhumbula.
Lesi siqhingi sihlela iTransvolcania okuyiyo eyi-Volcano indlela - nangale.
Ukuqala izinkanyezi esiqhingini saseLa Palma kungenye yezinto ezinhle kakhulu zezinkanyezi ezenzeka. Ngenxa yenqubomgomo ekhanyayo kakhulu, amalambu angaphandle kuLa Palma avikelwe kahle futhi isibhakabhaka sobusuku sisabukeka ukuthi kufanele kanjani: kumnyama futhi kugcwele izinkanyezi.
Imbuzi - i-cabrito (imbuzi encane, evame ukuthosiwa) iCabra (imbuzi endala, imvamisa edonswe). I-bienmesabe - isho ukuthi 'ukunginambitha muhle' futhi - - ama-alimondi asemhlabathini oju, amnandi kakhulu.
Ama-papas 'arrugadas, amazambane amancane abiliswe emanzini anosawoti esikhunjeni sawo, ayimali ejwayelekile eLa Palma njengoba anjalo kwezinye iziqhingi zaseCanary.
I-Mojos, ebomvu (i-rojo) ne-green (verde) nayo ijwayelekile eLa Palma.
I-Espresso enobisi olufushiwe oluhlotshisiwe, futhi kwesinye isikhathi ukudutshulwa kotshwala obunobungcweti yinto ekhethekile yendawo - Barraquito. Lesi siqhingi sinezinga elikhulu lezivini. UShakespeare ukhulume ngeMalvasia (iMalmsey emnandi) eqhamuka eziqhingini zaseCanary. Iwayini elihle kakhulu elenziwa eLa Palma lingathengwa ezitolo ezikhethekile nasezitolo ezinkulu.
I-rum eyenziwe endaweni iyatholakala.
Kunamahhotela abavakashi kanye namafulethi kuzo zombili iSanta Cruz neLos Llanos, 'amadolobha' amakhulu kulezi ziqhingi. Futhi eLos Cancajos nasePuerto Naos (izindawo ezimbili eziyinhloko zogu), kanye neBarlovento enyakatho neLos Canarios eningizimu.
Kunezindawo ezahlukahlukene zokuhlala amakhishi ezindaweni eziningi zesiqhingi. Lokhu kubizwa ngamakhasethi futhi ayabhuka.
Kunezimpesheni ezintathu eSanta Cruz ezinobubanzi bendawo yokuhlala ukusuka efulethini kuya kwigumbi eliyisisekelo elinamanani okubonisa lokhu.
Amatende avumelekile eLa Palma ezindaweni ezikhethekile zekamu, yize imvume idingeka ngaphandle kwaseLa Rosa.
Uma uhambela isikhathi
I-Gáldar Kwakuvame ukuba inhloko-dolobha ye Gran Canaria ngaphambi kokuba amaCastillian anqobe isiqhingi. UCueva Pintada (Umhume odwetshiwe) umele ucezu lomlando wesibalo sabantu be-guanche.
I-Arucas - Idume nge-rum yayo kanye nesonto layo. I-distillery ivulelekile emphakathini futhi ingavakashelwa mahhala. Kunamasampula wotshwala obuhlukile angahlolwa. Yidolobhana elihle futhi kufanele sikuvakashele. Kude kakhulu eLas Palmas.